AAPP | Assistance Association for Political Prisoners » Blog Archive » မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းဖြစ်မှုကို ကုသပေးခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော စိတ်ကျန်းမာရေးမူဝါဒများ လိုအပ်မှု
Home > MHAP အစီရငျခံစာ > မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းဖြစ်မှုကို ကုသပေးခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော စိတ်ကျန်းမာရေးမူဝါဒများ လိုအပ်မှု
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းဖြစ်မှုကို ကုသပေးခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော စိတ်ကျန်းမာရေးမူဝါဒများ လိုအပ်မှု
Posted on October 10, 2019 • Posted in MHAP အစီရငျခံစာ, Slide show (Burmese)
ဤအစီရင်ခံစာဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဓိကကြိုးစားပေးခဲ့သော Ms.Ronja Baatz အားလည်းကောင်း၊ ဘာသာပြန်ဆိုမှု အပါအဝင် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့သော AAPP ၏ စိတ်ဓါတ်ပြန်လည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ် (MHAP) နှင့် AAPP ဝန်ထမ်းများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ဝေနိုင်ရေးအတွက် ငွေကြေးအကူအညီပေးခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှသံရုံးနှင့် အစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲကို လက်ခံကျင်းပပေးသော ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံး ယဉ်ကျေးမှုဌာန Ms. Laetitia Hoarau (Technical Cooperation and Humanitarian Affair Officer, French Embassy in Myanmar ) အပါအဝင် သံရုံးတာဝန်ရှိသူများအား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (Assistance Association for Political Prisoners) မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၁၅ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကျန်းမာရေးပြဿနာ ၁၀ ခုတွင် စိတ်ဓါတ်ကျမှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု စံလွဲခြင်းတို့မှာ အဖြစ်များပြီး ဂရုစိုက်ဖြေရှင်းမှု အားအနည်းဆုံးသော စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်နေကြပြီး (IMHE 2015)ထိုပြဿနာနှစ်ခုလုံး၏ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် တိုးပွားလျက်ရှိနေသည်။ (WHO 2017) ထိုပြဿနာများသည် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းဖြစ်မှုများဖြစ်သည်။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းမှုများအတွက် ထိရောက်သော ကုသမှုများရှိသော်လည်း ကမ္ဘာ့လူဉီးရေအများစုမှာ ထိုကုသမှုများကို ရရှိနိုင်မှု မရှိကြပေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းမှုများအတွက် ကုသမှုကွာဟချက်သည် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိသည်။ (Than Tun Sein et al. 2014)မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် မူဝါဒရေးစွဲသူများအတွက် အားကောင်းသောစိတ်ကျန်းမာရေးတခုကို ဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းတရပ် ပွင့်လာခြင်းဖြစ်သည်၊ AAPP သည် စိတ်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကို ဉီးစားပေးအကောင်အထည်ဖော်နေသည့်အဖွဲ့များထဲမှ တဖွဲ့ဖြစ်ပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ တိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူပေး‌နေသော အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည်။ ယခုအစီရင်ခံစာသည် စိတ်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် AAPP ၏ ပထမဆုံး အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို ‌‌ဖတ်ရှုရန် MHAP Report Burmese Version
ဤအစီရငျခံစာဖွဈမွောကျရေးအတှကျ အဓိကကွိုးစားပေးခဲ့သော Ms.Ronja Baatz အားလညျးကောငျး၊ ဘာသာပွနျဆိုမှု အပါအဝငျ ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးခဲ့သော AAPP ၏ စိတျဓါတျပွနျလညျမွှငျ့တငျရေးအစီအစဉျ (MHAP) နှငျ့ AAPP ဝနျထမျးမြားအား အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
ထို့အပွငျ အစီရငျခံစာ ထုတျဝနေိုငျရေးအတှကျ ငှကွေေးအကူအညီပေးခဲ့သော မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗွိတိသြှသံရုံးနှငျ့ အစီရငျခံစာမိတျဆကျပှဲကို လကျခံကငျြးပပေးသော ရနျကုနျမွို့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ပွငျသဈသံရုံး ယဉျကြေးမှုဌာန Ms. Laetitia Hoarau (Technical Cooperation and Humanitarian Affair Officer, French Embassy in Myanmar ) အပါအဝငျ သံရုံးတာဝနျရှိသူမြားအား နိုငျငံရေးအကဉျြးသားမြား ကူညီစောငျ့ရှောကျရေးအသငျး (Assistance Association for Political Prisoners) မှ အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး မှတျတမျးတငျ ဖျောပွအပျပါသညျ။
၂၀၁၅ ထုတျပွနျခကျြအရ ကနျြးမာရေးပွဿနာ ၁၀ ခုတှငျ စိတျဓါတျကမြှုနှငျ့ စိုးရိမျပူပနျမှု စံလှဲခွငျးတို့မှာ အဖွဈမြားပွီး ဂရုစိုကျဖွရှေငျးမှု အားအနညျးဆုံးသော စိတျကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ပွဿနာမြားဖွဈနကွေပွီး (IMHE 2015)ထိုပွဿနာနှဈခုလုံး၏ ဖွဈပှားမှုနှုနျးသညျ တိုးပှားလကျြရှိနသေညျ။ (WHO 2017) ထိုပွဿနာမြားသညျ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိသော စိတျပိုငျးဆိုငျရာ နာမကနျြးဖွဈမှုမြားဖွဈသညျ။
ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိသော စိတျပိုငျးဆိုငျရာ နာမကနျြးမှုမြားအတှကျ ထိရောကျသော ကုသမှုမြားရှိသျောလညျး ကမ်ဘာ့လူဉီးရအေမြားစုမှာ ထိုကုသမှုမြားကို ရရှိနိုငျမှု မရှိကွပေ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိသော စိတျပိုငျးဆိုငျရာ နာမကနျြးမှုမြားအတှကျ ကုသမှုကှာဟခကျြသညျ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးနီးပါးရှိသညျ။ (Than Tun Sein et al. 2014)မွနျမာနိုငျငံ၏ လကျရှိနိုငျငံရေးပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြားသညျ မူဝါဒရေးစှဲသူမြားအတှကျ အားကောငျးသောစိတျကနျြးမာရေးတခုကို ဖနျတီးရနျအခှငျ့အလမျးတရပျ ပှငျ့လာခွငျးဖွဈသညျ၊ AAPP သညျ စိတျကနျြးမာရေးလုပျငနျးကို ဉီးစားပေးအကောငျအထညျဖျောနသေညျ့အဖှဲ့မြားထဲမှ တဖှဲ့ဖွဈပွီး စိတျကနျြးမာရေးဝနျဆောငျမှုမြား တိုးတကျမှုအတှကျ အထောကျအကူပေး‌နသေော အဖှဲ့အစညျးတခုဖွဈသညျ။ ယခုအစီရငျခံစာသညျ စိတျကနျြးမာရေးလုပျငနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ AAPP ၏ ပထမဆုံး အစီရငျခံစာဖွဈသညျ။